I-Kalami Beach Sunlight Villa-Enephuli yabucala
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguStamatoula
I-Villa Kalami Sunlight yindawo esanda kwakhiwa, inika umbono omangalisayo phezu kolwandle lwase-Ionian, umgama nje oyi-500m ukusuka eKalami Bay, edume ngomoya wayo wokuphumla kunye nee-tavernas eziphezulu. Yipropathi ebanzi ngenene yosapho okanye itheko labathandathu, elifakwe ngokwale mihla, kumgama nje oziikhilomitha ezingama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseCorfu. I-villa inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-4 kunye nephuli yabucala.
Indawo emangalisayo, ukufihlakala kunye nentuthuzelo enikezelwayo, yenza iKalami Sunlight ibe yindawo efanelekileyo yeholide ekhumbulekayo kunye neyokuphumla.
I-Villa Kalami Sunlight yindawo esanda kwakhiwa, inika umbono omangalisayo phezu kolwandle lwase-Ionian, umgama nje oyi-500m ukusuka eKalami Bay, edume ngomoya wayo wokuphumla kunye nee-tavernas eziphezulu. Yipropathi ebanzi ngenene yosapho okanye itheko labathandathu, elifakwe ngokwale mihla, kumgama nje oziikhilomitha ezingama-27 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseCorfu.
I-villa inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ama-4, igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-BBQ, indawo yokutyela yangaphandle kunye negumbi lokuhlambela labucala elinesisa.
Ubungakanani: 145 m2
Ibonelela ngezimvo zolwandle ezithandekayo kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya leeholide eliphezulu, iKalami Beach Sunlight Villa isetelwe ukuba ichukumise kungekuphela nje indawo ekuyo, kodwa nangomtsalane wayo.
Ngaphandle, i-infinity-style ye-swimming pool yangasese (ekhoyo ukusuka ngo-Epreli ukuya ku-Oktobha) ibekwe kwicala le-villa kwaye ijikelezwe yi-terrace yangasese ene-sunbeds ezi-6 kunye ne-parasols. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla ngelixa usonwabela iimbono kunye nezikhephe ezidlulayo. Ibarbecue eyakhiwe ngezitena enendawo yokutyela enomthunzi wangaphandle iyafumaneka kwizidlo ezimnandi ze-al-fresco. Indawo yokupaka yabucala iyafumaneka ngaphakathi kwamabala.
Isikhululo seenqwelomoya - iikhilomitha ezingama-25
Imivalo - 400 m
Ulwandle - 500 m
Isithili saseCentrum (ekuMbindi) - 20 km
Isikhephe - 30 km
Ikhosi yeGalufa - 20 km
IGrocery Store - 400 m
Indawo yokutyela - 100 m
Umbuki zindwendwe ngu- Stamatoula
Inombolo yomthetho: 0829Κ91000563401
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalami